Leopard Snow | Snow Leopard, naadi | CoinFalls Online Casino
Snow Leopard, naadi waxaa ciyaarta cusub ee ay soo WMS(ciyaareyso ay sayniska). ciyaarta Afyare waxaas oo dhan waa ku saabsan muuqaalka ah si weyn oo qurux badan baraf qariyey halkaas oo xaalado yihiin adag si ay u noolaadaan sida ku hareereysan noocyada kala duwan ee noocyada duurjoogta. Tani Mobile naadi casino ciyaarta ayaa dhexdhexaad ah in ay cadow sare oo ka mid ah ka heli karo lacagta macquul by waxaa macquul ah ciyaaro. Waxaa yimaado inuu ku laabanayo boqolkiiba ciyaaryahan ee u dhexeeya 94.00% iyo 97.75%.
Snow Leopard, naadi gameplay!!
Snow Leopard, naadi waa lix duntu, afartan si siddeetan paylines Afyare kaas oo lagu ciyaari karaa qadar yar oo ah 10p iyo lacagta ugu badan oo ah £ 500.00 per Lataliyihii. Oo weliba kulankaan waa la jaan qaada dhammaan qalabka taas oo ka dhigaysa arrin si fudud loo heli karo inta badan ciyaartoyda Afyare. Waxa kale oo uu leeyahay Combo ugu fiican ee ugu Qurxiyeen in naqshadeynta iyo animation u gaar ah kaas oo uu ku sameeyey caddaalad sax ah si theme ee ciyaarta Afyare this
Arag, Snow Leopard, naadi waxaa sidoo kale lagu taswiiray buuraha barafka safashada ah ka gees ah iyo calaamadaha waa mid ka mid ah dhibcood ugu soo jiidashada badan ee ciyaarta Afyare oo ka mid ah J this, S, K, A, 9 iyo 10 iyo sidoo kale dabagaalaha ah, bakaylaha, dagaalyahan iyo barafka shabeelka dumar cidhifka woqooyi. Astaanta shabeel barafka waa mid ka mid ah astaanta qiimaha ugu sareeya kaas oo ku siin kara ciyaartoyda ilaa 6 jeer ay wadarta tirka marka 6 calaamadaha waxaa ku degay payline a.
shabeel barafka waxaa aqoonsan sida icon ku duurjoogta ah oo badali karto oo dhan walxood oo kale si ay u sameeyaan combos guusha marka laga reebo kala firdhiso icon ciddiyihii orsada ayaa print ah. Waxa xiiso leh ugu yaraan hal ku ambadeen wax noqon doonaan si buuxda duurjoogta ah kulanka saldhig kasta si loo kordhiyo fursadaha guusha. Tan waxaa loo aqoonsan yahay sida 'barafka Leopard Wild' feature.
Tan waxaa lagu firfircoonaan by dhulka of 3 ama in ka badan oo ka mid ah astaanta ciddiyihii orsada ayaa print kala firdhiso in view on duntu ku. Ciyaartoyda heli doontaa mid ka mid ah kuwan soo socda:
3 fidiyana - 8 dhigeeysa free
4 fidiyana - 20 dhigeeysa free
5 fidiyana - 50 dhigeeysa free
6 fidiyana - 100 dhigeeysa free
Xulashada Bet Big Of Snow Leopard, naadi
Haddii ciyaaryahan doonayaan in ay soo duuduubo lacag dheeraad ah oo ku wareejin kasta oo ay sidaas samayn kartaa adigoo isticmaalka xulashada 'Big Bet' si ay u soo iibsadaan qaar ka mid ah muuqaalada dheeraad ah oo ay la socdaan 5 dhigeeysa lala on the 2 nooc ku xiga ee duntu ku. Ka dib markii taas oo, waxay waxaa lagu weydiin doonaa in ay qaado mid ka mid ah 3 hababka ciyaarta inuu u ciyaaro:
Aaddinta Wilds - ka duntu duurjoogta noqon meel la mid ah oo ku saabsan labadii duntu.
Duntu Independent - duntu aan ku lifaaqan kasta oo kale oo.
Tallaabadaas ayna miiqdaan iyo Wild duntu - duntu ka heli beehsa doonaa on labada duntu.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaartoyda guuleystayna uu noqon doonaa ku tiirsan ikhtiyaarka Bet Big iyaga by doortay.
Snow Leopard, naadi weli waa ku yaab kale Mobile naadi casino horumariyo by ay ciyaareyso ay WMS. ciyaarta Afyare waxa uu leeyahay lacag maydhashada muuqaalada bonus oo waa soo jiidata dhammaan kooxaha ciyaartoyda Afyare. waa dhab ahaan mid istaahila in tijaabo ah.